ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola base Italiyane I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo leMidlalo yeBhola ekhatywayo ngegama lesidlaliso "Brunelleschi". Ibali lethu leFederico Bernardeschi yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye neRise of Federico Bernardeschi. Ityala lemifanekiso: ThePlayersTribune, Iphepha lodonga Wallpaper kunye IGianlucadimarzio
Uhlalutyo olupheleleyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yosapho, imfundo / ukwakha umsebenzi, ubuchule bomsebenzi wasemva kwexesha, indlela eya kudumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubomi bobuhlobo, ubomi bomntu, iinyani zosapho, indlela yokuphila kunye nezinye iinyani ezingaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi Ungomnye wamathemba amnandi kakhulu e-Italiyane kunye netalente eyaziwa ngokuba nolwazi olusondeleyo nolungelogqibeleleyo kwiliso. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography kaFederico Bernardeschi enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UFederico Bernardeschi wazalwa ngomhla we-16th kaFebruwari 1994 kunina onguMongikazi notata, uAlberto Bernardeschi (umsebenzi wase fektri wemarble) eCarrara, indawo yaseTuscany, e-Itali. Apha ngezantsi kukho ifoto entle yolwandle encinci yeFederico Bernardeschi njengomntwana.
Ifoto enqabileyo kaFederico Bernardeschi njengomntwana. Ityala lemifanekiso: ThePlayersTribune
UFederico Bernardeschi unosapho lwakhe oluvela eCarrara, isixeko kumbindi Italy esaziwa ngegama lesidlaliso lakhe; 'Isixeko semarble'. Ngoku umbuzo:… Kutheni iSixeko saseMarble? ... Kungenxa yokuba iCarrara idume ngemifanekiso yayo emhlophe emhlophe yeCarrara. Ubusazi?… IsiXeko saseMarble njengoko kubonwe ngezantsi ikwayindawo yokuzalwa kunye nekhaya lomgcini wegoli lase Italiyane Gianluigi Buffon.
Ifoto entle kaCarrara (IsiXeko saseMarble) apho uFederico Bernardeschi eneMvelaphi yakhe yoSapho. IsiXeko saseMarble. Ityala lemifanekiso: iknolibarh kwaye Twilley kwaye I-TuscanyPrivateTour.
Omnye wabazali bakaFederico Bernardeschi- utata wakhe wasebenzela inkampani yemarble edolophini ngeentsuku zakhe zobuntwana. Njengabantwana abaninzi abanabazali abaxakekileyo (abazali), uFederico wayenokubona utata wakhe rhoqo ngokuhlwa njengoko Alberto uzosebenza ixesha elide, ukuvuka ebhedini ngu-5 am, ukuphuma ekhaya ngaphambi kwe-6 kusasa kwaye ubuyela ekhaya e-6 pm Ngenxa yoko, uFederico uchithe ixesha elininzi lobomi bakhe ebusheni kunye nomama wakhe kunye nodadewabo omncinci, uGaia.
Ukudibana kwendibano ngebhola yeBhola ekhatywayo: Xa uFederico Bernardeschi wayeneminyaka emithathu ubudala, utata wakhe wamsa kwivenkile enkulu yokudlala kwiziko ledolophu laseCarrara. Njengoko uFederico omncinci wayethatha amanyathelo amabini ngaphakathi kwisitolo, into yokuqala awayibonayo yibhola. Kwangoko, wabaleka waya ngqo kuyo, wayichola, waxelela utata wakhe ukuba lixesha lokuba bemke. U-Alberto wayefuna ukuba uFederico ajonge ezinye iithoyi, kodwa wala ukunganyanzeli ukuba ufuna ibhola yebhola kuphela.
"Ngenxa yokuba ndiyibonile into endiyifunayo" kwibhola ekhatywayo ", andivumelanga nantoni na ukuba ihambe ngendlela yam. Sisimo sam eso okanye Ndifanele nditsho ukuba, luphawu lwabantu oluvela kwingcambu yosapho lwam. Abantu abavela eCarrara banzima njenge marble - Ukufumana ulwazi oluthe kratya, buza UGigi Buffon. "
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Kwasebutsheni bakhe, uFederico wenza olona khetho lokugqibela lokuba ngumdlali webhola ophambili. Ekuqaleni, bekukho imiceli mngeni kwimfuno yakhe yokufumana eyona mfundo yebhola ekhatywayo. Kwindawo ahlala kuyo uFederico, kwiSixeko saseMarble, kwakungekho maqela alulutsha alungileyo. Emva koko, lelona qela libalaseleyo elumelwaneni, I-ASD Sporting Atletico Carrara akazange ayinike into efunwa ngabazali bakhe emva kokuchitha ixesha elincinci kunye nabo.
Ukuze ufumane okufanelekileyo kunyana, abazali bakaFederico Bernardeschi kwafuneka benze ukhetho. Bobabini umama notata wakhe bavumile ukuba unyana wabo ashiye esikolweni kwangoko 3: 15 pm (Imizuzu ye-45 ngaphambi kokuba iiklasi zesikolo ziphele) ukuze uhambe uyokudlala ibhola nge-academy entsha.
I-Federico Bernardeschi Ubomi boMsebenzi waseNkolweni kunye neAtletico Carrara. Ityala: IG
Kwiminyaka yesibhozo, uFederico Bernardeschi waqala ukufumana imfundo yakhe yebhola kunye Polisportiva Ponzano, iziko loqeqesho lwebhola ekhatywayo ne-Empoli, malunga ne-70 yeekhilomitha kude nekhaya losapho. Emva koko, umama wakhe wayenokumlanda esikolweni yonke imihla ngaphambi kwexesha lokuvala, amenze atye isidlo sasemini (i-pasita eqhelekileyo) kwaye umqhubele ukuya e-Empoli ngwevu yosapho I-Opel Vectra. Ukuthetha ngamava emihla ngemihla njengoko ThePlayersTribune uyibeka, uFederico Bernardeschi ukhe wathi;
“Kuba ndiyazi ukuba bendidla ngokufika kade. Kuya kufuneka ndibophe iibhutsi zam emotweni. Umama wam akanakuyeka. Ukufika kwam, ndiza kuphuma ndisiya kwigumbi lokuphumla ukuze ungene kwiseshoni yam yoqeqesho. Kwiiyure ezimbini kamva, uqeqesho lwebhola lwaluya kuphela, kwaye sibuyele ngendlela efanayo naleyo sifike ngayo. ”
Naxa wayefika ekhaya evela esikolweni kwaye exakekile kwezemidlalo, abazali bakaFederico Bernardeschi kunye namanye amalungu osapho babesazi ukuba zimiselwe izinto ezinkulu njengoko beziza kumbukela ezijonga izakhono azifundileyo.
Ubusazi?… UFederico ebengazukulala ebhedini kude kube yi-10: 30 pm okanye 11 pm qho ngokuhlwa, avuke ekuseni kakhulu ayenze yonke futhi. Ukuzimisela kunye nokusebenza nzima emva kwexesha kuhlawule izabelo. Xa uFederico Bernardeschi wabizwa ukuba aye kuzilingo kunye noFlorentina, ikratshi lawo onke amalungu osapho (bendihlala naye kuwo onke amabakala ohambo lwam) yayingenamda.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Isilingo esiphumeleleyo sabona uFederico Bernerdeschi ngonyaka we-2003 (Kwiminyaka ye-9) ukujoyina iphiko le-Fiorentina. IFlorence, idolophu ekwakukho kuyo iklabhu ibikukude nje kwimpuma ye-Empoli, kwindlela enye uFederico kunye nomma wakhe babeqhuba.
Kwasebutsheni bakhe, utata kaFederico Bernerdeschi wayehlala endicenga ukuba ndenze ngcono, ndizive ndinomsindo ngaye ngalo lonke ithuba elilahlekileyo. Kwibhaso lokulawula uxinzelelo olwenziwe ngutata wakhe, uFederico ukhe wathi;
“Xa usengumntwana, ngamanye amaxesha uziva unolwazelelo olukhulu kakhulu ingakumbi xa luvela kutata okucaphukisayo ngalo naliphi na ixesha ungazibekeli phezulu.
Kodwa njengoko ndandikhula kancinci, ndaqala ukuqonda ukuba utata wam ufuna okungakumbi kum kuba yena kholelwa kum ”
Uxinzelelo olwenziwa ngutata wakhe lwamkhokelela ku-Federico omncinci ekwenzeni umbono omkhulu kunye neklabhu njengoko wayeqhubela phambili kuluhlu lolutsha, echuma phezu kwabo nabaphi na abaphikisi abeza ngendlela yakhe.
I-Federico Bernardeschi yokuQala iminyaka kunye neFiorentina. Ityala lemifanekiso: IG
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Kwiminyaka ye-16, uFederico Bernardeschi owayedlala ibhola ebalaseleyo ngobomi bakhe wayevale kakhulu ekwenzeni ukubonakala kweqela eliphezulu kunye neFiorentina. Njengoko wayecinga ukuba yonke into ebomini bakhe iqhubeka kakuhle. ngelishwa yenzekile.
Iindaba Ezilusizi: Yonke iqale imini ehlwempuzekileyo u-Federico waya kuhlolwa umzimba ngokwesiqhelo. Iqela lezonyango laseFlorentina lafumana into, abathi iqhubeka ngokungahambi kakuhle emzimbeni wakhe ebaqhubela ukuba benze olunye uvavanyo kunye neeXrays. Kwiintsuku ezimbalwa kamva, ugqirha mfutshane abazali bakaFederico Bernardeschi bakubonile emzimbeni wonyana wabo.
Unyana wakho unentliziyo eyandisiweyo. Asiqinisekanga ukuba kubi kangakanani kuwe. Nangona kunjalo, kunokwenzeka, ngekhe akwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe webhola. "
Ugqirha uxelele abazali bakhe. Njengoko bekulindelekile, u-Federico akakholelwa kuyo, enyanisweni, akavumi ukuva, ekhwaza .. "Hayi ... ayinakwenzeka loo nto ”. Kuthathe umzamo omkhulu ukuba umama kaFederico agcine umdlali webhola onenkathalo ezolile.
UFederico Bernardeschi wafunyaniswa ukuba une-Cardiomegaly okuthetha ukuba Intliziyo eyandisiweyo. Ityala lemifanekiso: WebMD
Emva kokubek 'esweni le meko ngokusondeleyo, oogqirha bagqiba ekubeni uFederico angabinakho ukudlala ibhola kwiinyanga nje ezintandathu, iindaba ezazisenza ukuba usapho lakwaBernardeschi luphuculwe. Ngexesha lokulinda, wazama ukuzigcina exakekile kwinto awayebiza ngayo njengeyona inzima kwiinyanga ezintandathu zobomi bakhe. Emva kovavanyo oluninzi, utyelelo lweengcali kunye neentlanganiso, ekugqibeleni uFederico wacocwa ukuba aqhubeke nebala lakhe.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Nge-20 kaJuni 2014, uFederico wangena kwiqela lokuqala phantsi kwemiyalelo kaVincenzo Montella. Ngaphantsi kweminyaka emithathu emva kokuba ugqirha obonakalayo, (oneminyaka eyi-22), uFederico omncinci wanikwa umphathi-we-armband ngenxa yombulelo ukukhula, ukusebenza nzima, ukuqonda okuhle okubonakalayo kunye neliso leenjongo. Ukuba yinkokeli kwinqanaba le-22 ye-XNUMX kuthathwa njengento encinci kwimeko yebhola yase-Itali apho amava aphathwa kakhulu.
Kwixesha elilandelayo (2015-16), Bernardeschi bekunjalo unike inani ihempe ye-10 ngaphambili eyayinxibe njengoRoberto Baggio. Kwangelo xesha, wafumana igama lakhe lesidlaliso "Brunelleschi", emva koyilo oludumileyo. enkosi kubuchule bakhe kunye nokugqwesa kwisandi.
UBernardeschi wayephethe ijezi ezili-10 Inani leqela leqela elifuzisisiweyo eliphumeleleyo nguRoberto Baggio. Imboleko yeMifanekiso: umnyama
Njengenkokeli encumisayo kwisandi, u-Federico Bernardeschi wanikwa imbasa yeBhola yeBhola ye-AIAC phantsi kwe21 Award. Impumelelo ayimiselanga apho, waba kuphela kwe-Italiya kumdlalo weqela le-Champions League ye-UEFA ye-Under-21 ye-Championship ye-Championship. Oku kwabamba amehlo kwezinye iiklabhu eziphambili zaseYurophu.
Yiba yenye yezona ndawo zishushu kwezona zikwibhola ekhatywayo yase-Itali eyatsalela iimbaleki eziphambili zikaFiorentina, uJuventus owamenza oyena mdlali uphezulu kwiprofayile ukusukela oko uBaggio (kwi1990) washiya uFlorence ukuba ajoyine. Ngexesha lokubhala, UFederico Bernardeschi uncede iqela lakhe ukuba liphumelele phantse yonke into kwibhola ekhatywayo ye-Itali; Serie A, Coppa Italia kunye Supercoppa ehlonelwayo e-Italiana.
Ukunyuka kunye nokunyuka kwe-Federico Bernardeschi. Ityala lemifanekiso: I-Pinterest, FootyAnalyst,
Ngeminazana ithile, umntwana ongazange akhethe ezinye izinto zokudlala ngaphandle kwebhola unazo ngoku banyamezele ukunyuka okunyulu ukuya kumphambili phambi kwamehlo ethu. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Emva kwayo yonke indoda ephumeleleyo, kukho umfazi othusayo eshukumisa amehlo akhe. Kule meko ye-Azzurri yamazwe aphesheya, ngokwenene yayingu-WAG wobukhazikhazi owathi kamva waba yintombi. Akanguye omnye umntu olungileyo UVeronica Ciardi.
Dibana noFederico Bernardeschi Girlfriend- uVeronica Ciardi. Ityala lemifanekiso: IidropNews
Ukwazi uVeronica Ciardi: Uzalelwe abazali base-Italiya, uVeronica waba ngomnye wabagqatswa abathandayo kwi-2009 inguqulelo yase-Italiya kaBig Brother. Ngexesha lakhe kumdlalo wokwenyani, wakhulisa ubudlelwane nomnye umntu owayekhuphisana ogama linguSarah Nile. Obu budlelwane yinto enye ebangele ihlazo kumabonwakude wase-Itali ngoba yayingeyokuqala intombi intombi ibali lothando ukuba liboniswe ngomboniso wase-Italy.
UFederico Bernardeschi Girlfriend- uVeronica Ciardi kunye nesithandwa sakhe uSarah Nile. Ityala lemifanekiso: pinkmonster
Ubudlelwane bukaVeronica noSara baphela ngoSeptemba 2010 emva koxinzelelo olukhulu oluphuma kumatshini waseItali. UFederico Bernardeschi oneminyaka elithoba ubudala kunoVeronica baqala ukuthandana naye kwiminyaka embalwa kamva emva kokuba benothando okokuqala kwintlanganiso e-Formentera.
Emva kweminyaka emibini emangalisayo yokuthandana, u-Bernardeschi ongazange ajonge iimpazamo zakhe kwi-Big Brother wagqiba kwelokuba acele intombi yakhe ukuba ithini I-Italian media, yenzeka kwindawo yothando.
U-Bernardeschi waphakamisa intombi yakhe emva kweminyaka emibini yokuthandana. Imboleko yeMifanekiso: ye-forzaitalianfootball
Ngelishwa, izinto azihambanga kakuhle kwesi sibini njengoko sasibhengezile ukwahlula okuhle ekuqaleni kwe2017. Ukuthetha ngamava akhe obudlelwane nentombi yakhe, uBernardeschi uthe kuyamenza wakhula njengomntu. Emva kweenyanga ezintlanu zokuqhekeka kwabo ngelishwa, intombi kaFederico yatyhila ngokusemthethweni ukwahlukana kwakhe naye nge-Instagram.
Iminyaka embalwa emva koqhekeko lwabo, bobabini ababathandayo kwintlekele bafika esiphelweni njengoko babebuya bethandana, begcina ubudlelwane babo buyimfihlo iinyanga. Kwi-28th ka-Agasti 2019, uVeronica noFederico baba ngabazali.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi ngobomi babucala bakaFederico Bernardeschi kukunceda ufumane umfanekiso ongcono malunga nendlela aphila ngayo ubomi bakhe ngaphandle koxhotyiso.
Kuba yayinemabula emhlophe kakhulu enemibala emhlophe xa wayesakhula, uFederico wathi ezi marika ngamanye amaxesha ziya kuvuza kumaphupha akhe enza umfanekiso entloko ngelixa evuka ebhedini. Esi siganeko simangalisayo saqala xa wayeneminyaka emithandathu ubudala.
Ukwazi uFederico Bernardeschi uBomi boBuntu bungaphandle kwesandi. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
Ukufana kweNja yakhe: Abadlali bebhola abadumileyo, oko kukuthi C Ronaldo, Neymar, Sánchez njalo-njalo zizithandwa zenja zokwenyani. Nokuba wena kukho intetho ethi akukho bunyani bushiyekileyo kumdlalo wale mihla, ngokuqinisekileyo ayithathi ingqalelo ubudlelwane obabelwe phakathi kukaFederico nenja yakhe enkulu.
UFederico Bernardeschi ngomnye wabathandi bezinja abaphambili bebhola. Ityala kwi-Instagram
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
Ibali losapho lakwaBernardeshi elichazwe ngaphambili, lifundisa abalandeli bebhola ekhatywayo bezabalaza, kodwa bezimisele ukuphumeza ubukhulu bokukholelwa ukuba 'eyona ndlela yokuziva unganathemba kukuvuka kwindawo yabo yokuthuthuzela wenze into eyahlukileyo'. Endaweni yokulandela utata wakhe kwi Imisebenzi yemarble ye-marble, uFederico namhlanje wenze yonke intsapho yakhe ukuba ibe neqhayiya ngayo Ukudala eyakhe yakhulayo usapho lwayo ukuze luzimele geqe kwezemali, ngenxa yebhola. Ngoku, masikunike ukuqonda okungakumbi kumalungu osapho lwakhe.
Malunga noTata kaFederico Bernardeschi: Njengabazali abaninzi 'UCarrara'isixeko saseMarble, u-Federico utata u-Alberto wasebenza kwi-Carrara Marble ye -ryry iminyaka. Waye luhlobo lotata obesebenza iiyure ezininzi, evuka e5 am, eshiya umsebenzi ngu6 am kwaye ebuyele ekhaya nge6 pm Wayezothatha ezinye iindlela zokuhamba ngelixa eshiya i-Opel Vectra yakhe engwevu ishiya umfazi wakhe nonyana ( I-Federico) yokusebenzisa xa kuvalwa phakathi kwekhaya, isibhedlele, isikolo kunye neziko loqeqesho lwebhola.
U-Alberto udume ngokwenza unyana wakhe ukuba abe nomhla wakhe wokuqala kunye ne-destiny eyaqala ukusuka ngexesha lokuhamba kwakhe kwivenkile yokudlala apho athola khona ibhola yakhe yokuqala. Ukumnyanzela ukuba enze ngcono nangaphambi kwexesha lomsebenzi obhataleleyo.
Malunga noMama kaFederico Bernardeschi: Wena igama alaziwa njengexesha lokubhalwa. Nangona kunjalo, amajelo eendaba ase-Italiya anokuthi u-Federico's mum wasebenza njengonesi kwisibhedlele esingekude nekhaya losapho lwabo. Wayenamandla othando, kodwa ngamanye amaxesha wayeprinta iswitshi ukuze emhlabeni unyana wakhe. U-Federico, phakathi kwakhe notata wakhe, wayenolungelelwano olulungileyo (I-Players Tribune ingxelo).
Malunga Nabazala bakaFederico Bernardeschi: Kubonakala ngathi ayinaye umntakwabo, kodwa uFederico ngudade ogama linguGaia Bernardeschi. Gaia yaziwa ngokuba Ukubonelela ngenkxaso yemvakalelo kumntakwabo kwanawe oko kuthetha ukubeka ubuntu bakhe esichengeni.
Dibana noFederico Bernardeschi kaDade- Gaia Berna. Ityala lemifanekiso: Facebook
Wabamba ingqalelo yabalandeli xa wenza impikiswano malunga nomntakwabo emva kokufumana amanqaku ngokuchasene neklabhu yakhe yakudala uFiorentina. Udadebo kaFederico Bernardeschi ukhe wathi;
“Mzalwana othandekayo, wena bakwazile ukuguqula iiBoos zabalandeli bakaFiorentina baba ngumculo. Udanise ngebhola ezinyaweni zakho emva koko wathulisa ibala,… Ungumzalwana omkhulu !!!. Bathandekayo bakaFiorentina abalandeli, ndivelana nani, kodwa njengamaxesha onke, umntakwethu ubonakalisile uhlobo lwendoda nomdlali onguye. Ngoku wonke umntu uthule kwaye sikuvuyela kakhulu oku ”.
La mazwi kaFederico Bernardeschi udadewabo kaGiana wayekho kwi-9 ngoFebruwari 2018, emva kokuba umntakwabo efumene izithuko ezivela kubalandeli basekhaya ngalo lonke ixesha lomdlalo apho wafumana khona ibhola ekhatywayo ngesiqingatha sesibini ukuze athule abantu.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - yokuPhila
Indlela yokuphila yeebhotshi eziphambili zebhola ekhatywayo zibonakala ngokulula ngeejethi zabo zabucala, izindlu ezinkulu, kunye nokuzonwabisa okulula. I-Federico, ulicandelo lokuphila ubomi obukhulu bokukhetha ukuqhuba iimoto ezilula, umbala obonisa ukuhlala Indlela yokuphila ephakathi.
UBernardeschi luthotho lokubonisa indlela yokuphila engaqhelekanga. Imboleko yeMifanekiso: uyilo lobumbeko, i-autobytel kunye ne-Fiorentina IT
Nangona ephila nje ngokomndilili, indlu kaFederico yeyokuhonjiswa ngemifanekiso yeenkawu ezintathu, isibane seenkawu kunye nomdlalo we-marble chess, sisipho esivela kutata wakhe owayevela kwidolophu yakowabo iCarrara.
I-Federico, ayikho malunga nokuhlala lula ekhaya, kodwa ukuchitha iiholide kwiindawo ezintle zolwandle.
UFederico Bernardeschi uchitha ezinye zeemali zakhe zokuba neeholide zolwandle. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Xa sele unomdla wokuba athathe umntwana omnyama: UFederico Bernardeschi ukholelwa ukuba ibhola ibalulekile, kodwa kuye, yeyona nto ibalulekileyo emhlabeni 'sa'. Ngenxa yokuba uFederico kunye nentombi yakhe- uVeronica uCiardi zizithunywa zezulu ezinkulu Gcina a bantwana Umbutho ongekho phantsi korhulumente. Oku kubonile ukuphucuka kobomi bala ntombazana intle ebonakala ngathi iphantsi kononophelo lwabo.
UFederico Bernardeschi kunye nentombazana encinci yimizekelo emsulwa yabamhlophe abamhlophe abathanda abantwana abamnyama. Ityala: Instagram
I tattoo kaFederico Bernardeschi izisa iinkumbulo zomhlobo oswelekileyo: Ngaphandle kwepeyinti yakhe yokuthandaza ka-Ave Maria, uFederico unomzobo we tattoo wenombolo yomhlobo wakhe osele efile. Kwiiveki ezimbalwa emva kokudlula kukaAsa Astori, wafumana inani le tattoo ecaleni komthandazo wesiko lamaKatolika.
UFederico Bernardeschi uzukisa u-Davide Astori nge-tattoo yenombolo yakhe. Ityala lemifanekiso: Umbono kwaye ThePlayersTribune
Inkolo kaFederico Bernardeschi: Abazali bakhe bamkhulisa bengumKatolika kwaye uzinikele kakhulu kwinkolo yobuKristu. Ubungqina bemvakalelo yakhe eqinileyo yokuba yinkolo yamaKatolika ifunyanwa kwi-inki ye tattoo ye-Ave Maria ezandleni kunye nefoto yakhe kunye nepapa engezantsi.
Inkolo ka-Federico Bernardeschi ichaziwe. Ityala lemifanekiso: Instagram
Nje ukuba iThagethi ye-United: UFederico, xa wayekwishumi elivisayo wayengomnye wabanetalente eyachukumisa uSir Alex Ferguson. Owayesakuba ngumphathi weManchester United waye washiywa echukumisekile kangangokuba wanqwenela ukuyisayina kwi-2011. Ubusazi?… intshukumo ayikwazanga ukugqitywa kuba utata kaFederico wamqinisekisa ukuba azokuhlala kwilizwe lakhe.
I-Federico Bernardeschi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Isishwankathelo seVidiyo
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leFederico Bernardeschi yoBuntwana kunye neNqaku le-Biold ye-Untold. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.